၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက် Visual Storytelling ကိုထိရောက်စွာမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း Martech Zone
အဆိုပါ buzzword နေစဉ် အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ အမြင်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏စိတ်ကူးသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ လူ ဦး ရေ၏ ၆၅% သည်အမြင်အာရုံသင်ယူသူများဖြစ်ကြသည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌ရုပ်ပုံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်လူကြိုက်များသောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်မှာလျှို့ဝှက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏အယူအဆကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်လေးစားလိုက်နာခြင်းဖြင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်သည် အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ ပုံတစ်ပုံကိုပြောဖို့ပုံတွေသုံးနေတဲ့နေရာ။
သိပ္ပံပညာကကျွန်ုပ်တို့၏ noggins များသည်ရုပ်ပုံများကိုချစ်ရန်ကြိုးတပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်အမြင်အာရုံပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ငါတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကဘာကိုချစ်တာလဲ။ ပုံပြင်များ။ ငါတို့အဲဒါကိုမကူညီနိုင်ဘူး သတင်းအချက်အလက်ကိုဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်စုစည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိအားပေးခံရသည်။
ထုတ်လုပ်ဤသည် infographic ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ Widen သည်ကောင်းမွန်သောကိန်းဂဏန်းများနှင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာဇာတ်ကြောင်းပြောပြခြင်းနှင့်သင့်စီးပွားရေးအတွက်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
ဒီနေရာမှာ infographic ကနေတချို့အထူးများ
ပုံများပါ ၀ င်သည့်ဆောင်းပါးများသည်ဆောင်းပါးများထက်ကြည့်ရန် ၄၄% ပိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အစစ်အမှန်လူများ၏ဓါတ်ပုံများကိုနှိပ်သူများသည် ၂၀၀% ရောင်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပို့စ်များ၏ ၉၃% ရှိသည် (၂၀၁၂ တွင် ၈၃% ရှိခဲ့သည်) ။
ပုံရိပ်တွေပါတဲ့ Tweets တွေက retweets ၁၅၀% ပိုရတယ်။
အမြင်အာရုံဇာတ်ကြောင်းပြောပြခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံပြုချက် ၁၄ ခုကိုဖတ်ရှုရန်မှတဆင့် scroll လုပ်၍ သင်၏အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအချို့ကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်မျှဝေပါ။
ဌာနခွဲမက်ထရစ်: ပြောင်းခြင်း၊ ကြီးထွားခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုစစ်ဆေးခြင်း
SMS ဆိုတာဘာလဲ။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းစျေးကွက်ဖွင့်ဆိုချက်အဓိပ္ပါယ်
15:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 20
ဒီမှာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များ! Infographics သည်ဖတ်ရန်အလွန်ကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိရောက်စွာအသုံးပြုပြီးကောင်းမွန်စွာဖန်တီးနိုင်မှသာ။ ငါသည်ဤတ ဦး တည်းအကြီးအဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။